Iowa har’a dabalataan namni 35 sababa Covid-19 du’uu gabaasan, namni haarawa qabamoo ammo 713 yoo ta
By Fatiya Adam • Feb 9, 2021
Oromo news 2/9/2021
Iowa har’a dabalataan namni 35 sababa Covid-19 du’uu gabaasan, namni haarawa qabamoo ammo 713 yoo tau qorannoo bulti 14 godhame keessati lakkofsi gad bu’aa akka deemu jiru himan.
Akka gabaasa guyyaa har’aati namni waliigalatti due sababa Covid-19 5,145 tauu himan, akkaata gabaasa coronavirus.iowa.gov tti.
Woodbury County keessati, namni haarawa qabame 18 yootau seati 24 darbe keessati ammo namni haarawa due hin jiru.
Iowa Gov. Kim Reynolds kaampaadhin toola ooltatotaaf qarqaarsa walitti guuruf se’aati booda caarata
By Fatiya Adam • Feb 8, 2021
Oromo News 02/08/2021
Iowa Gov. Kim Reynolds kaampaadhin toola ooltatotaaf qarqaarsa walitti guuruf se’aati booda caarata guddaa uumte jirti.
Barreesitooni email akka ibsanatti bara 2019 keesati caaratan kan mulatte qonnaan bultoota kan filatte dha, kunis kaampani pork hunda keessati. Iowa keessati Reynolds wayta campaigns kan qarqaarte Deb fi Jeff yoo tau isannis $300,000 dhaani.
Seeraan kutta fayyaa akka jedheti guyyaa haar’a namni haarawa corona virus qabame 804, akkaata gabaa
By Fatiya Adam • Feb 5, 2021
Oromo News 02/05/2021
Seeraan kutta fayyaa akka jedheti guyyaa haar’a namni haarawa corona virus qabame 804, akkaata gabaasa website coronavirus.iowa.gov. akkasumatti se’ati 24 keessati namni haarawa du’e 44 dha, waligalatti namni du’e Kuta keessati 5,067 gaheera.
Iowa qorannoo bultii 14 godhan keessati parsantiidhan 9.1% gaheera, kunis qorannoo guyyaa kamsaa godhame 9.3% irraa gadxiqqaate jira.
Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffa Anii Fatiya.
By Fatiya Adam • Feb 4, 2021
Oromo News 02/04/2021
Iowa nama sababa Covid-19 due guyaa har’a wajiin nama 5000 gutte. March 24 turee deparmantin fayyaa kan state yeroo jalqabaaf due sababa corona virus galmeesite.
By Fatiya Adam • Feb 3, 2021
Oromo News 02/03/2021
Haalli qilleensa dabalataan har’aa galgalaa irraa hangaa boriiti Siouxland keessa kan darbu ta’a. National Weather Service Office akka jedhetti qilleensi daddafiin darbu kun Snow inche lama tau akka fiduu dandau fi bubbee seaati tokko keessati miles 45 akka deemu malu himan.
Guyyaa borii Siouxland, Woodbury County, Dakota, fi Union Counties dabalatee hanga galgalaati qilleensa winter akka argatan himan.
Deparmantiin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 seati 24 keessati namni haarawa 13 du’anii jiran, nam
By Fatiya Adam • Feb 2, 2021
Oromo News 02/02/2021
Deparmantiin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 seati 24 keessati namni haarawa 13 du’anii jiran, namni haarawa qabame ammo 800 oldha.
State guututi namni 400 ol hospitaala akka jiran gabaasame jira. Guyyaa jalqaba kaleessa irra namni 22 dabalee jira, hospitaala lama kan Sioux City nama afur dabalatee, waliigalati dhukubsatoota 25 oltu jira.
Qorannoo bultii 14 kan Woodbury County keessa godhame parsantii 7.7% gaheera jira.
Iowa public health official akka jedhanitti Iowa keessati corona virus bifti sadii gara garaa United
By Fatiya Adam • Feb 1, 2021
Oromo News 02/01/2021
Iowa public health official akka jedhanitti Iowa keessati corona virus bifti sadii gara garaa United Kingdom keessati akka mulatte himan. Kanneen keessa inni lamaa Johnson County kan eastern Iowa keesa fi tokko ammo Bremer County northeast Iowa keesati akka mulate himani jiran. Akka qorannoo scientific Variant strain waamamuti B.1.1.7 akka jedhettu inni kuni virus isaa qaraa irra daddafe akka babalachuu dandauufi akka nama ajeesu dandaus himan. Talaalin jalqaba rakkoodhaf akka buaa tae nibeekama. Haatau malee, Iowa vaccine baaye akka ture himan.
Maneen barumsa akka guyyaa har’aa Governor Kim Reynolds malatteesiteeti barumsa hunduu akka qaaman b
By Fatiya Adam • Jan 29, 2021
Oromo News 1/29/2021
Maneen barumsa akka guyyaa har’aa Governor Kim Reynolds malatteesiteeti barumsa hunduu akka qaaman baratamu qabuudha.
Warri seera mana baruumsa Aanaadhan akka nama hunda qaaman barsiisuf jalqaban hanga February 15th kenneefi jira.
Hawaasni mana barumsaa Sioux City akka gabaasanitti deparmantin mana barumsa Iowa barattootni marti akka mana barumsa deemani baratan murteesse jira. Seera kunis barattoota kamuu kan Iowa keessa jiraataniif kan oolu ta’a.
Guyyaa har’aa, deparmantin mana fayyaa Iowa akka gabaaseti Iowa keessati namni haarawni Covid-19 du’
By Fatiya Adam • Jan 28, 2021
Oromo News 1/28/2021
Guyyaa har’aa, deparmantin mana fayyaa Iowa akka gabaaseti Iowa keessati namni haarawni Covid-19 du’ee 32 namni haarawa qabame ammo 1,264 dha. State keessati waliigalatti namni 300,000 ol kan qabameedha. Qorannoo bultii 14 keessati namni qabame parsantin dhaan 10.2% dha.
Woodbury County keessati, namni haarawa qabame se’ati 24 keessati nama 22 yoo tau sababa Covid-19 namni 18 hospitaala jiran. Namni haarawa due hin jiru. Parsantiidhan wayta kaahamu namni qabame 8.5% dha.
Governor Iowa Kim Reynolds akka jetteti state talaali Covid-19 dabalataan ni argata jetten, haata’u
By Fatiya Adam • Jan 27, 2021
Oromo News 1/27/2021
Governor Iowa Kim Reynolds akka jetteti state talaali Covid-19 dabalataan ni argata jetten, haata’u malee ka ammaara baaye kan guddatuudha.
Iowa ammati talali coronavirus jiraatota kuma 19 tiif gahaa argatanii jirani torban tokko keessati.
Gov. Kim Reynolds akka jetteti torbaan dhuftu lakkoofsi sun kara parsantii 16% kan dabaluu ta’a innis kaluu kuma 26 tti. Nebraskan ammati talaali 23,500 argattee jirti.
National Weather service akka gabaasetti Sioux Gateway airport snow inches 5.7 akka buee himan
By Person: Fatiya Adam • Jan 26, 2021
Oromo News 1/26/2021
National Weather service akka gabaasetti Sioux Gateway airport snow inches 5.7 akka buee himan. Haatau malee, bakke wan garii kan Siouxland qofti snow muraasa kan argatteedha. Bakka biraati fi Nebraska keessati hanga mila ol argatanii jiran.
Manni barumsa gariin turanii kan jalqaban yoo ta’an baayen isaani ammo cufanii jiran, Sioux City fi South Sioux City dabalate.
Omaha snow guddaa bue kan bara 1975 as buee hin beekin guyyaa torba kessatti argate kunis snow inches 12 dha.
Haali qilleensa hagaayya bubbee qabuufi biyyoota qixxee US heddumina isaanitin snow kan buusu ta’a a
By Fatiya Adam • Jan 25, 2021
Oromo News 1/25/2021
Haali qilleensa hagaayya bubbee qabuufi biyyoota qixxee US heddumina isaanitin snow kan buusu ta’a akkasumas deemsalle rakkisu nimala.
Tajaajili haala qilleensaa biyyoolessa kan Sioux Falls akka jedhetti snow irra guddaan south Sioux City keessati kan bue akka tae dubbatan.
Sioux City Snow Inches 5 akka argachuun maltu dubatan.
Mani baruumsa gariin har’a yowaan gad dhiifamani South Sioux City dabalatee, Snow emergency hanga bori seaati jahati kan bu’u ta’a.
State Iowa guyyaa tokko namni 1,300 corona virus akka qabame gabaasan. namni 33 akka duemmoo gabaasa
By Fatiya Adam • Jan 22, 2021
Oromo News 1/22/2021
State Iowa guyyaa tokko namni 1,300 corona virus akka qabame gabaasan. namni 33 akka duemmoo gabaasani jiran, akka waliigalaati erga dhukubni kun jalqabe nama 4,478 duee jira, akka gabaasa coronavirus. Iowa.gov websie gabaasaniti. Waliigalatti Iowa keessati namni qabame ammo 310,596 dha. Sababa corona virus ammo namni hospitaala jiru 450 ha.
Akka waliigalatti namni qabame jiru parsantii 10.1%.
Namni kamuu umrii 65 fi isaa ol ta’an Iowa dabalatee talaali corona virus kan kennamu ta’a. February
By Fatiya Adam • Jan 21, 2021
Oromo News 1/21/21
Namni kamuu umrii 65 fi isaa ol ta’an Iowa dabalatee talaali corona virus kan kennamu ta’a. February 1 kan jalqabuudha. Governor Kim Reynolds akka jetteti jiraattota Iowa 530,000 ol ta’aniif talaalin lamaffaa kan kennamu ta’a.
Talaalin lamaffaa kan jalqaba kennamu hojattoota, first responders fi barsiisota kan kennamuudha. Garuu akka Reynolds jetteti talaalin kun jiraattota maraaf hanga silaa hin qophooyne.
Miseensoni congressional Iowa martinuu nama tokko malee hundi isaanitu eebba President Joe Biden kan
By Fatiya Adam • Jan 20, 2021
Oromo News 01/20/2021
Miseensoni congressional Iowa martinuu nama tokko malee hundi isaanitu eebba President Joe Biden kan Washington irrati argamanii jiru.
Dubattaan akka jedhetti bakka bu’aan Randy Feenstra kan Hull, haala guyyaa har’aa seeran hordafu ture, garuu Iowa turuudhan qophii mucatti isaa taba Basketball kan Dort University dhaqee hordafu ture. Bow wayta House reconvenes jalqabu gara Washington nideebia.
NEWS 1.19.21: OROMO
Oromo News 01/19/2021
Barsiisonni Nebraska fi hojattooni meatpacking talaali Covid-19 hojattooni umriin isaani deeme umrii waggaa 65 ol ta’an kan jalqaba kennamu yoo tau hojattoota maraan wal gahuuf akka turu malu himan. Namni hojattoota barumsaa tokko marfee kana March as akka argachuu hin dandeenef baaye gadde.
Lakkoofsi Covid-19 qabamaniifi kan hospitaala jiran Woodbury County keessati gad xiqqata deemu jira.
By Fatiya Adam • Jan 18, 2021
Oromo News 01/18/2021
Lakkoofsi Covid-19 qabamaniifi kan hospitaala jiran Woodbury County keessati gad xiqqata deemu jira. Garuu ogeessi fayyaa akka jedhetti ummani ammas corona virus akkumaa qaratti ofiraa eegu qabani.
By Fatiya Adam • Jan 15, 2021
Oromo News 01/15/2021
Of eegannoo Blizzard kan siouxland hanga seeati 6 tura kan jedhame ture, yeroon inii dhabatuu taee jira haali qilleensa kunis hang halkan qixxeeti kan itti fufu ta’a.
Local authorities mana akka taa’an gorse yoo gad bahuun dirqama qofa tae male.
National weather service kan Sioux falls akka jedheti yoo bakka tokko kan deemtani mucucaa muraasaf akka dura qophaahu qabdanii fi osoo ala gad hin bahin haala qilleensa akka laalu qabdan jedhani himan.
By Fatiya Adam • Jan 14, 2021